Xukuumadda Puntland oo meel-marisey xeerar ganacsi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xukuumadda Puntland oo meel-marisey xeerar ganacsi
Xukuumadda Puntland oo meel-marisey xeerar ganacsi
December 31, 2015 - By: Abdirizak Shiino
Golaha Wasiirada ee Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah isugu yimid shirkoodi u danbeeyey ee ay yeeshaan sanadkan 2015, waxaana shir guddoominaayey Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Gaas.
War murtiyeed ka soo baxay shirka Golaha Wasiirada ayaa waxyaabaha ugu badan ee Wasiiradu ay ka hadlen ay ahaayeen anisixnta xeerar ganacsi.
Xeerka Shirkadaha Dhismaha
Golaha Wasiirada ayaa ansixiyey xeerka shirkadaha dhismaha, xeerkaas oo ka hadlaya damaanad qaadka dhismayaasha laga hirgelinayo dalka, si loo helo dhisme tayo leh oo la isku haleyn karo, sida lagu yiri war murtiyeedka, xeerkan ayaa adkaynaya masuuliyadda shirkadaha iyo kuwa qaata Qandaraasyada. Xeerkan ayaan soo gaarin gacanta Warbaahinta, waxaana ka so shaqeysey Wasaaradda Hawlaha Guud.
Xeerka Khidmadda iyo Ajuurada Kalluumeysiga
Xukuumadda Puntland ayaa meel marisey xeerka khidmaddaha iyo ajuurooyinka ee Wasaaradda Kalluumeysiga, xeerkan ayaa lagu sheegay war murtiyeedka in uu sahlayo sidii ganacsatada Kalluumeysigu u noqon lahaayeen kuwo la tartama suuqyada waaweyn ee caalamka, Golaha Wasiiradu ma soo bandhigin qaabka ay ku noqon karaan Kalluumeysatadu kuwo tartankaas gala, sidoo kale waxaan warbaahinta soo gaarin xeerkan khidmadda looga qaadayo Kalluumeysatada. Xukuumadda Puntland ayaa sheegtey in xeerka khidmadda uu laba jibarayo wax soosaarka iyo ganacsiga Kalluunka, taas oo aan la caddeyn sababta!.
Xeerla Shirkadaha Ganacsiga
Golaha Wasiirada ee Puntland ayaa si guud u meel-mariyey xeerka shirkadaha ganacsiga. Xeerku waxa uu adkaynayaa asaasida shirkado ganacsi, waxa uu qeexaya kala ilaalinta magacyada shirkadaha, si dalku u yeesho ganacsi hanaqaada oo la tartami kara dhamaan shirkadaha waaweyn ee Adduunka, sida lagu yiri war-murtiyeedka.
Garoonka Diyaaradaha ee Bosaso
Dhanka kale Xukuumadda Puntland ayaa sheegtey in meel fiican uu marayo qaban-qaabada lagu duraayo Garoonka diyaaradaha ee Bosaso, waxaana ka soo qayb-galaya sida la sheegay ganacsato ka imaaneysa magaalooyinka Muqdisho, Jabuuti iyo Adis Ababa.
Xukuumadda Puntland ayaa mar kale guddi u saartey xuska maalintii uu xilka ku guuleystey Madaxweynaha Puntland ee 8 Janaayo, taas oo lagu soo bandhigo khudbado la xiriira waxqabadkii Xukuumadda, iyo bandhig faneedyo lagu amaano Puntland iyo Madaxdeeda.